Faha 20 taonan’ny vondrom-bavaky ny fadintseranana | Douanes Madagascar
Nanatanteraka fiaraha-mivavaka ho fitahian’Andramanitra ny fanokafana ny fankalazana ny faha-20 taonan’ny vondrom-bavaky ny fadintseranana tao amin’ny « akany FJKM Isotry fitiavana » ny mpiasa ato amin’ny fadintseranana ny 10 aprily 2019 tamin’ny 8 ora sy sasany. Tonga nanatrika sy nanome voninahitra ny fotoana ireo Ray aman-dreny eto amin’ny fadintseranana sy ireo mpanentana ity vondrom-bavaka ity.
Nitarika ny fotoana ny mpitandrina RAKOTONDRABE Andrianarijaona Ndrianja. Nisy ny hira, vavaka, toriteny, rojom-bavaka, ary teny fisaorana avy amin’ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny.
Fifaliana lehibe ho an’ny mpanatrika ny nandray ny mpitandrina IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi (filohan’ny FJKM) nitondra ny toriteny. Niompana tamin’ny andinin-teny ao amin’ny Jaona 15 :16 nofidiana tamin’ity fotoana ity ny toriteny. Raha fehezina ny hafatra nampitaina dia teboka 3 no nosinganiny hampitaina mivantana amin’ny mpiasan’ny fadintseranana:
Mahereza tohizo ny dia,
Aza mihatsara ivelatsihy.
Nanao teny fisaorana sy fankasitraha ny ray amandreny eto amin’ny fadintseranana Eric RABENJA.
Fankasitrahana ny mpitandrina nasaina izay tonga nitory teny teto amin’ity fotoana ity. Fisaorana ny tompon’ny toerana « AKANY FJKM ISOTRY FITIAVANA » nivoriana sy nandraisana ny mpiasan’ny fadintseranana, ary fisaorana ny mpikarakara rehetra nahatanteraka ny fotoana.
Mbola betsaka ny azo resahina amin’ity faha-20 taonan’ny vondrombavaka ity izay hanan’ny eto amin’ny fadintseranana tombony betsaka tokoa
Nofaranana tamin’ny fiaraha-miala hetaheta ny fiarahana.